Raw Nandrolone (Durabolin) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Raw Nandrolone (Durabolin) poda ndiro yakagadzirwa anabolic steroid ine unhu hwakasiyana uye inogona kubatsira mukurapa utano hwemurume oga, kana sechidimbu cheTST yevanhu vanonyengera. Nandrolone ine hafu yehupenyu hupenyu hurefu mu plasma uye yakasimba yakabatana ye androgen receptors.
Raw Nandrolone (Durabolin) powder (434-22-0) Tsanangudzo
Nandrolone inogadzirwa nevanabolic steroid ine unhu hwakasiyana uye inogona kubatsira mukurapa hutano hwevanhu chete, kana sechirevo cheTST chevanhu vane hypogonadal. Nandrolone ine hafu yehupenyu hupenyu hurefu mu plasma uye yakasimba yakabatana ye androgen receptors. Nandrolone esters inoshandiswa pakurapa anemias, cachexia (kuparadza syndrome), osteoporosis, kenza yemazamu, uye zvimwe zviratidzo. Haisi kushanda nemuromo uye inofanira kupiwa nerakisi mu musumbu.
Nandrolone esters vakatanga kurondedzerwa uye kujekeswa kwekushandisa kwechiremba munguva yekupedzisira ye1950. Ndivo pakati peAAS inoshandiswa zvikuru pasi rose.Kuwedzera kune kushandisa kwavo kurapa, nandrolone esters inoshandiswa kugadzirisa muviri uye kushanda, uye zvinonzi ndeyovakawanda zvikuru akashandisa AAS nokuda kwezvinangwa izvi.
Kemikari Name NADROLONE;NANDROLON;NANDROLONE;NORANDROSTENOLONE;NORTESTOSTERONE, 19-;(17beta)-estr-4-en-3-on ;17-beta-hydroestr-4-en-3-one ;17beta-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one
muchiso Name Deca-Durabolin, Deca-Durabol
Kirasi yeMishonga Androgen; Anabolic steroid; Progestogen
Kunyorera Point 120-125 ° C
Dhikirai: 357.38 ° C (yakawandisa kuongororwa)
Skukodzera Mvura Solubility, 0.0561 mg / mL
APane Nandrolone inoshandiswa kurapa hutano hwemurume oga, kana sechidimbu cheTST yevarume ve hypo hypoadal.
1 Kudzokorora nokuti Raw Nandrolone (Durabolin) powder (434-22-0)
Chigadzirwa NANDROLONE (DURABOLIN) chinobatsira zvikuru.